लखेट्दै लगेर बलात्कार ! - Everest Dainik - News from Nepal
लखेट्दै लगेर बलात्कार !
म्याग्दी, असोज ३ । चार जना किशोर किशोरी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ५ पाउद्धारमा रहेकी दिदीको घरमा हिँडे । उनीहरु १२ देखि १५ बर्ष उमेर समूहका थिए ।
८ः२० तिर बिजुली आयो । बत्तीको उज्यालोले बाँकी तीन बालबालिकामा साहस आयो । उनीहरु स्थानीयको घरमा पुगे । रातको समयमा रुदै कराउँदै आएका अपरिचित किशोरकिशोरी देखेपछि स्थानीय लीलबहादुर खड्काले सोधीखोजी गरे । उनीहरुले आफूहरुमध्ये एक जनालाई तीन युवाले मुख थुनेर अपहरण गरी लगेको बताए ।
याे पनि पढ्नुस म्याग्दीकोे बेलढुंगाले पर्यटकलाई लोभ्याउँदै
ट्याग्स: myagdi, Rape